Pantheon: Oké WordPress ma ọ bụ Drupal Bochum na New Relic | Martech Zone
Ọ bụrụ na m nwere mkpesa ọ bụla banyere ahụkarị nhazi usoro, ọ bụ na ha anaghị ekwe ka ị dozie ma chọpụta ajụjụ na akụ yana otu ha si emetụta usoro njikwa ọdịnaya gị. Ihe dị mfe dịka ịmegharị nchekwa data gị nwere ike belata oge ọ ga-ewe peeji gị iji obere akụkụ. Pantheon na-agbanwe nke a!
arụsị bụ nhazi usoro nnabata di elu maka WordPress na Drupal onye mmepe. Pantheon na-enye ndi otu web webusaiti nile nke ihe nkwalite, nnabata, nhazi, arụmọrụ, workflow, na akpaaka ha chọrọ iji wuo ebe nrụọrụ weebụ kachasị mma n'ụwa.
Jikwaa saịtị dị mfe - Jikwaa saịtị WordPress na Drupal gị niile site na otu dashboard. Na-arụkọ ọrụ na ọrụ dị mfe n'etiti ndị otu.
Machiini DevOps - Hapụ onwe gị na ndozi ihe nkesa. Ka Pantheon automate sysadmin rụọ ọrụ- ị nwere ike ilekwasị anya na ịmepụta nnukwu weebụsaịtị.
Arụ ọrụ maka Ezigbo Agile - Push gbanwere ngwa ngwa na oge. Jiri mwekota na-aga n'ihu na njikwa njikwa yana igbe, igbe, na gburugburu.
Jiri ike dị n'otu nke Pantheon tinyere New Relic Pro, ndị ahịa anyị nwere ngwaọrụ iji wuo, malite, ma na-agba weebụsaịtị dị ịtụnanya, ọsọ ọsọ na enweghị nchekasị, yana arụmọrụ kachasị. New Relic Pro bụ ihe nkwado zuru oke na ikpo okwu Pantheon ma anyị nwere obi ụtọ ịnye mmepe weebụ a, njedebe na njedebe nchịkọta ụlọ na enweghị ụgwọ ndị ọzọ ndị ọrụ Pantheon. Zack Rosen, ngalaba-nchoputa na CEO nke Pantheon
Ndị ọrụ Pantheon nwere ike hụ na arụmọrụ kachasị weebụsaịtị yana oge niile nke mmepụta - site na mmepe gaa ibipụta akwụkwọ. Ọrụ arụmọrụ gụnyere:
Nzipụta ọkwa ọkwa na-enye ndị ọrụ ikike ịchọpụta ihe kpatara nsogbu arụmọrụ, ruo na oku ọrụ, maka nyocha nke ọma na nchọpụta nsogbu.
Ntughari mbupu na-enye ndị mmepe ohere ịlele arụmọrụ n'oge oge na-achọpụta ngwa ngwa nsogbu nsogbu.
Tonweta New reel na gburugburu mmepe ọ bụla - Gburugburu Multidev, Dev, Test, na Live – na - enyere ndị ọrụ aka ijide nsogbu arụmọrụ tupu ha agazie ma jiri obi ike tinye ya.
Ndị ọrụ Pantheon ga-enweta ohere na New Relic APM Pro ozugbo ma nwee ike ịnweta arụmọrụ saịtị nchịkọta na ntaneti nke ikpo okwu Pantheon.
Tags: agilenkenye ọnọdụDrupalmmepe drupalNew Relicọhụrụ relic proarụsịnjikwa weebụsaịtịWordPresswordpress mmepeakwụkwọ ntinye akwụkwọarụmọrụ WordPress